Wafti uu horkacayo madaxweynaha Somaliland Md Daahir Riyaale Kaahin oo maanta la filayo inay soo gaadhaan Laascaanood
Riyaale oo ku soo fol leh Laascaanood.
Laascaanood,Somalia,07 December 2002 �Warar deg deg ah oo aanu ka helnay magaalada Laascaanood ayaa sheegaya inay halkaasi ku soo fool leeyihiin Wafti reer Somaliland ah oo uu horkacayo Madaxweyanaha dawlada la magac baxday Somaliland.
Imaanshaha waftigan oo beryahanba laga hadal hayey magaalada Laascaanood ayaa waxay ku soo beegantay iyada oo xiisad siyaasadeed ay ka aloosan tahay deegaamada Sool,Sanaag iyo Buuhoodle,iyadoo isla markaana ay imaansha weftigan ay u sii gogol xaareen dhowr wafti oo kale oo beryahanba ku soo qulqulayey deegaankaas,waftigaas oo u ololaynaya doorashooyinka ay dawlada la magac baxday Somaliland ka qaban qaabinayso deegaankaas.
Mar aanu maanta khadka talafoonka kula xidhiidhnay weriyayaal madaxbanaan oo ku sugan magaalada Laascaanood waxay noo sheegan in guud ahaan xalada magaaladu ay caadi tahay,balse waxaa magaalada soo buuxiyey ciidamo fara badan oo ka yimid dhinaca waqooyiga,waxaa isla markaana magaalada ku sugan dhamaan taliyayaasha ciidamada Somaliland,marka laga reebo taliyaha guud ee ciidamada Somaliland oo aan isagu imaan.
Mar aanu wax ka weydiiney weriyayaasha bal hawsha ay fuliyeen wasiiradii Somaliland ee beryahanba ku sugnaa magaalada,waxay noo sheegeen inay nimankaasi oo badanaa u dhashay deegaanka ay qorteen ciidamo badan,isla markaana ay badanaa ciidamadii u joogey maamulka dawlad goboleedka Puntland gobolka oo aan beryahaanba wax mushahar ah qaadan ay in badan oo ka mid ihi ku biireen ciidamada Somaliland,ciidamadaas ayaa la rabaa inay amaanka magaalada ula wareegaan sida ugu dhakhsiiyaha badan intaan la gaadhin 15-December,xiligaas oo doorashadu dhici doonto.
Waxaan haba yaraatee aan wax dhaqdhaqaaq ah samayn ciidmadii reer Puntland oo iyagu beryahaanba isku urursanayey meel duleedka magaalada ah,ciidankaas oo ka sugayey xoojin dhinaca Boosaaso ayaa hada rajada laga leeyahay inay wax ka qabtaan isbedelkan siyaasadeed ee magaalada ka dhacaya ayaa maalinba maalinta ka danbaysa sii yaraayana.
Arintu si kastaba ha ahaatee waxaa cad in badanaa dadka magaalu ay hadal hayaan imaanshaha Riyaale iyo weftigiisa,balse in badan oo k amid ah dadka deegaankaas ayaa ku tilmaamay waxaan caqliga geli kareyn in Riyaale yimaado magaalada iyadoo uu Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland C/llaahi Yuusuf laga hor istaagey inuu yimaado magaalada Laascaanood.
Masuuliyiinta ciidmada Somaliland iyo booliska ee magaalada burco ayaa heegan la geliyay ilaa iyo inta uu dhaafayo waftiga Riyaale.
Waftiga Riyaale ayaa wax ka mida xubno golaha wasiiradiisa iyo golaha wakiilada Somaliland,lama oga in Rayaale ku hakan doono magaalada burco iyo in kale intaanu u gudbin magaalda Laascaanood.